Zoi The Escape lalao tsy azo atao amin'ny Android | Androidsis
Manohy ny fizarana horonan-tsary izay hanoloranay anao izahay ny lalao Android tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Raha omaly dia natombokay ny fizarana niaraka tamin'ny lalao toa an'i Mortadelo sy Filemón izay ny kalitaon'ny sary sy ny scenery no tena mahavariana indrindra amin'ny lalao. Androany isika dia hanolotra sy hanolotra lalao iray izay amin'ny lafiny sary no tsotra indrindra azontsika jerena ao amin'ny Google Play Store, na dia mikasika ny fiankinan-doha azo avy amin'izany aza dia azo antoka fa tsy manam-paharoa amin'ny karazany sy ny haavon'ny lalao tsy azo atao toa Flappy Bird o Flappy droid.
Antsoina ny lalao Zoi The Escape, ananantsika izany fampidinana mivantana ao amin'ny Play Store an'ny Google, Fivarotana Apple ary na dia ao aza kinova web hilalaovana amin'ny Internet.
Alohan'ny hanombohanao milalao Zoi The Escape, adidiko ny milaza aminao izany iray amin'ireo lalao mampiankin-doha indrindra ho an'ny Android izay nahazoako vintana na loza, arakaraka ny fijerinao azy, hanandramana amin'ny terminal Android -ko manokana tato ho ato. Ho fanampin'izay, mahatsapa ho adidy ara-moraly aho hanome hevitra sy hanome torohevitra anao izany tsy lalao mety amin'ny olona mijaly amin'ny hozatra izany, nanomboka «Nitombo ny fahasahiranana» hametraka ny rafi-pitatitra eto amintsika io.
Tsotra toy ny fampiasana a ny lalao paompy tsotra eo amin'ny efijery avy amin'ny fitaovantsika Android, ataovy mitsambikina ny toetra ZOI, karazana kankana mahafinaritra, izay tsy maintsy ilaintsika manampy miakatra any an-tampon'ny sakana mihetsika izay manakaiky antsika amin'ny hafainganam-pandeha hafa.
Ao amin'ny efijery voalohany amin'ny tontolo voalohany, ho fanampiana antsika dia aseho antsika ny zana-tsipika mena izay hanondro ny fotoana marina izay tsy maintsy hikasihantsika na hikasihanay ny efijery an'ny Android antsika ka hiakatra tena marina ny ZOI ary tsy ho marina natsipin'ny sakana. Avy amin'ny efijery fahadimy na fahenina, ity fanampiana fanampiny ity dia hanjavona ka hamela antsika amin'ny vintantsika sy ny fahaizantsika manokana.
Raha fintinina, ary efa nampitandremako anao eo am-piandohan'ireto andalana ireto, lalao iray mampiankin-doha indrindra mety ho hitantsika anio ho an'ireo terminal Android. Lalao tsy mety amin'ny osa fo ary azo antoka izany mahasosotra kokoa noho ny Flappy Bird mahomby.
Ampidino - Zoi ho an'ny fitaovan'ny Apple, Zoi hilalao amin'ny tranonkala
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Zoi the Escape lalao mampidi-doza sy tsy azo atao amin'ny Android
Ho avy ao amin'ny Hay Day ny Noely miaraka amina endrika vaovao maro: gana, salon fanaovana fikarakarana gana ary maro hafa